Yekutanga Arch Linux ISO neLinux Kernel 4.18 iri pano | Kubva kuLinux
Yekutanga Arch Linux ISO neLinux Kernel 4.18 iri pano
Iyo yaSeptember 2018 yekuvaka yeakakurumbira Arch Linux iri pano uye ndiyo iyo kutanga kuunza Linux Kernel 4.18 pasi.
Arch Linux 2018.09.01 yasvika svondo rino uye ndiyo yekutanga 'snapshot'iyo inogadziridza iyo kernel mapakeji, iyo kernel yeLinux inoshanda sisitimu, kune yazvino uye yepamberi vhezheni, Linux Kernel 4.18.
Kuvaka kwemwedzi wapfuura, Arch Linux 2018.09.01, yanga ichiri kushandisa Linux Kernel 4.17.11 uye sezvo vhezheni 4.18 yakasvika mavhiki maviri apfuura, muna Nyamavhuvhu 12, 2018, zvakagadziriswa kuti zviiswe mukuvakwa kwemwedzi uno. Inofanira kuyeukwa kuti Linux Kernel 4.17 akateedzana asvika kumagumo ayo kutenderera uye izvo zvakabatsira kusarudza shanduko.
Linux Kernel 4.18 inosvika iine gadziriso yeSpecter kushomeka, Ino nguva yezvakasiyana 1 uye 2 pane 32-bit ARM zvivakwa uye Specter musiyano 4 paARM64 (AArch64) uye ARMv8 zvivakwa.
Uye zvakare, inounza runtime compiler yezvirongwa zveEBPF mune 32-bit (x86) dhizaini uye inowedzera kutsigira kwepamutemo kweQualcomm Snapdragon 845 processor processor ine ARM yekuvakisa.
Kunze kweLinux Kernel 4.18.5, ISO Arch Linux 2018.09.01 zvakare inosanganisira software inogadziridza uye gadziriso yekuchengetedza yakaburitswa kuburikidza neyepamutemo repamutemo mukati memwedzi.
Semagariro netsika dzekuburitsa, Arch Linux 2018.09.01 yakagadzirira kuisa pane chero muchina. Kuiisa kubva pakutanga kuchakuchengetedza kubva pakukanda mazana ezvigadziridzo mushure mekuisa system, Arch Linux 2018.09.01 inogadziridzwa zvizere kusvika mwedzi unouya
Arch Linux inotevera fomu rekuburitsa inonzi "Kutenderera Kuburitswa", Saka munhu wese ane system yakaiswa anogona kugadzirisa achishandisa rairo imwechete mune terminal, sudo pacman -Syu.
Unogona kurodha Arch Linux 2018.09.01 kubva ku zviri pamutemo webhusaiti uye wochinjisa kune diski kana USB.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Yekutanga Arch Linux ISO neLinux Kernel 4.18 iri pano
Wayland inoda kutiza kubva pane zvakajairwa kutumira
GNOME 3.30 "Almeria" yakatoburitswa zviri pamutemo